SingForYou.net - Min Thanar Mha
Min Thanar Mha
Score: 95 Rating: 5.00 Comments: 42
Min Thanar Mha's Description
Many thanks par friend yay
မင်းသနားမှ ကို့ ဘ၀က ချမ်းသာလှပမှာပါဆိုတော့ အကြွေးတွေ မရသေးလို့ လားဗျ... အဟီးးး..နောက်တာ... အဆို..အသံ..သီချင်းနဲ့ လိုက်ဖက် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံပါ၏..
:) thank you par friend
mama g tanar ma larz...arrr ko g.....aheeeeeeeeeeee:)))))))))))))) dar lay lelz gud nay tar pelz.........so coolllllllllllllllllllllllllllll.........bravooooooooooo...:clap :clap :clap ..........million starz for u par chint..>>>>>>
:) thanksalot par sister :)
min ta nar mha nha hta min sar ya melz lout ne nor :PPP so twar tar ayan kg tal :Clapzzzz mite par ei so twar tar ayan kg ayan lan ayan good par shint ***********)))))
:) hote tal sis yay,, min ta nar mha , hta min sar ya mar...:D......thank you for listening sister
:haha,, great vocalist ko seven si ka, thin ya ohn mal....:)
yellownavy on Feb 23, 2010 0
WoW... Your vocal suits MYZ's songs too... Very nice as always... More Graham and more MYZ pls ..... Bravo..... 5*
yes, sister,,,kyoo sar pii so kyit par mal,sister :) thank you nor sis
သီချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ. အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ. ကိုအောင်ထွန်း ဆိုသွားမှတော. .......ကောင်းပြီးသားပါပဲ...
Thank you so much for your comment ,sister paradise
saikyaw on Feb 23, 2010 0
ကောင်းတယ်..ချိုသောသစ်ခွ ပြော သလိုပါပဲ..အသံနဲ့ လိုက်တယ်..ခင်မင်အားပေးလျှက် ..အကို လား ညီလား မသိတော့..ညီလို့ ပဲ အမှတ်ထားလိုက်ပြီ..အကိုလုပ်ချင်လို့ (အသက်ကြီးတယ်လို့ မပြောချင်လို့ ဟားဟား)..5 ***** နော်
ya par tal bro,, bro ko tot,,ako lot pal khaw par mal,, with respect par :) Thanksalot par,bro
ကျေးဇူးပဲကိုအောင်ထွန်းရေခုလိုမာရဇ္ဖသီချင်းလေးဆိုပေးတာ ကိုအောင်ထွန်းရဲ့ Vocal ကိုပထမဦးဆုံးစကြားကတည်းက Orchid စိတ်ထဲမှာ မာရဇ္ဖသီချင်းနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာတန်းသိ လိုက်တယ်...မာရဇ္ဖသီချင်းတွေကြားရရင်ဘယ်လိုမှန်းမသိဘူးစိတ်ထဲကနေအရမ်း Feeling ဖြစ်တယ်...ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ ဂရုဏာပြည့်နေတဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို ဆိုပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးနော်..Orchid စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာက မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့ တစ်မိနစ်နောက်ကျ က 9Naing နှင့် Match ဖြစ်ပြီးအရမ်းကြိုက်တဲ့သီချင်းဖြစ်သလို ကိုအောင် ထွန်းကိုတော့ မာရဇ္ဖရဲ့မင်းသနားမှနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားသလို ကိုMusic ကိုတော့ နန္ဒဧရာ ရဲ့ ကြယ်ကြွေညတိုင်းဆုတောင်းမယ် .....စင်ကာပူမှာထီပေါက် ရင်စီးရီးထုတ်ရင်ကိုအောင်ထွန်းကိုမာရဇ္ဖရဲ့သီချင်းဆိုခိုင်းမယ် ဟိဟိ...စောစောစီးစီး ကော်ဖီနဲ့ မင်းသနားမှနဲ့ သောက်နေ တယ်....ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး...
sister,, thank you for your comment,,,, bro ko phyogyi is one of my favourite singer here in SFY,,,,i like his singing style too,,, sister's voice is also very nice,,,,, Thanksalot par,,sis
another nice one.....5*******
thank you very much par, *************
woww....good tal bro AT yay ..ta kal listen lo kg tal ..*********************arr pay twer par tal nor..:)
Thanksalot par,, sister forevermoe
Thank you par brother sithunaung
kounghtetsan on Feb 22, 2010 0
သူငယ်ချင်းရေ.. တစ်ကယ်ကို မတွေ့ကြတာ.. တော်တော်ကြာပြီနော်.. အခုမှ အားပေးမိတာ.. ခွင့်လွှတ်ပါကွာ.. အရှုပ်တွေလုပ်နေလို့ပါ.. ဟီးးးးး.. အသံလေးတောင် ပိုကောင်းလာသလိုပဲကွာ.. ရှယ်ပဲသီဆိုသွားတာ.. အားပေးသွားပါတယ်. သူငယ်ချင်းရေ..5********** ခင်မင်လျှက်. ကောင်းထက်
aungtun1 on Feb 22, 2010 0
thank you so much for your comment , brother kounghtet.......
SKB on Feb 22, 2010 0
ကိုအောင်ထွန်းရေ အားပေးလျှက်ပါဗျာ ရှယ်ပဲနော့ အားပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
Kyay zuuahtoo tin par tal, brother SKB yay....:)
brownlay on Feb 22, 2010 0
ayann ko kg del bro AT... all starsssssss again! *******!
sister brownlay,aku lo arr pay datatwet,, kyay zuu tin par tal....sister
turikimuriki on Feb 22, 2010 0
arr pay thwar par tel shint .... really nice2listen par bro yay ... bravooo ... 5*4u :))))))
thanksalot par, sister turikimuriki
thant on Feb 22, 2010 0
Bro AT so yin kg pye yinn kg bae........*******
:),,, sister thant ka tot,, myaut pay nay pi .... Kyay zuu tin par tal sister thant
aww bro gyi lal bae thu tha nar mha chan thar ya mhar lal pyaw SFU ka so yin tot i pyaw pay mel...kaung tal byo...pyaw sa taung ma lo par bu nor...
:) .........song lay ko kyite lot so tar par, brother,,, bar ko mha ma yee ywal par buu,,,, honestly,,, thank you for your friendly comment,bro
Ilovemusic on Feb 22, 2010 0
wow...kg hla chi lar...ko AT yay.....really so nice to listen par.....5*4yr great singing par...bro yay.
thank you par my bro Ko Music,,,,,
wow full mood နဲ့ bravo bravo bravo ... ***** :)))))
thanksalot par sister.......... :)
So so nice Ko AT yay...Ko AT yae min ka tawt thanar ma thanar lar ti buu.. listen ya tae lu taung, thanar pyii 5* ma ka pay chin tal:D************************
:) thank you par sister pp ................